चुनावको अघिल्लो दिन सार्वजनिक गाडी चल्छ कि चल्दैन ? – BikashNews
२०७९ वैशाख २६ गते ११:२९ विकासन्युज
काठमाडौं । बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको अघिल्लो दिन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरैको प्रश्न धेरैकाे मनमा छ ।
हाल निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात बैशाख २९ गते अपरान्ह १२ बजेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुने भन्ने हल्ला फैलिएको छ ।
उक्त हल्लाले निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न गाउँघर जाने तयारी गरेका अधिकांश मतदाताहरु दोधारमा परेका छन् ।
बजारमा चलेको हल्ला हामीले निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीलाई सोधेका छौं । बैशाख २९ गते सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले २९ गते निर्धक्कसँग सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने बताए ।
‘२९ गते सार्वजनिकसँगै सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालन हुन्छ, निर्वाचनको दिन अर्थात बैशाख ३० गते निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएका सवारी बाहेक अन्य सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाईएको छ’, उनले भने ।
सिमानाकादेखि आन्तरिक उडानमा रोक
बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका दिन आन्तरिक उडानहरु रोकिने भएका छन् । वायुसेवा सञ्चालक संघले आईतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्वाचनका दिन सम्पूर्ण उडान तथा अवतरणहरु बन्द हुने जनाएको हो ।
नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले हालसम्म विमानस्थल बन्दको घोषणा भने गरेको छैन । निजी वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक उडान बन्दको घोषणा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरण भने सुचारु नै रहने जनाईएको छ ।
यस्तैगरी, सरकारले मंगलबार रातिदेखि ७२ घण्टासम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि मंगलबार मध्यरातिदेखि मतदान हुने दिनसम्मका लागि सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गर्न लागेको हो ।
मतदानको दिनभन्दा अगाडिको ७२ घण्टालाई मौन अवधि मानिन्छ । मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने र चुनाव प्रचार गर्न बन्देज लगाउने गरिन्छ ।
यस्तै, मतदानको दिन सवारी अनुमति पत्र बोकेका गाडीहरु मात्र गुड्न पाउने भएका छन् ।
One comment on "चुनावको अघिल्लो दिन सार्वजनिक गाडी चल्छ कि चल्दैन ?"
PLEASE CLOSED ALL WEEK INCLUDING RAKSHI SELLER N HOTEL GOOD TO BE CONTROL BY NEPAL POLICE TEAM AFTER 6PM TO12 MID NIGHT